Yintoni injongo yobomi ngokweBhayibhile Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Yintoni injongo yobomi ngokweBhayibhile. Oko umntu ekuleli hlabathi uyazibuza yintoni intsingiselo yobukho bayo. Yeyona nto inkulu engaziwayo kubomi bethu. Sizizilwanyana ezinengqiqo kwaye ke kufuneka sikhangele Ukuphendula kule nyaniso ngomthetho unobangela kunye nesiphumo.
Nangona kunjalo, nangona abantu abaninzi bebhadula ebomini bengazi kakuhle ukuba mabuphile okanye ngaphandle kwenjongo yokwenyani, wonke umKristu, lo mbuzo unempendulo ecacileyo. Sinetyala nje funda uhlalutye iBhayibhile ukuze uyazi.
1 Yintoni injongo yobomi ngokwebhayibhile: Ingcaciso ngeendinyana
2 Ungayizalisekisa njani injongo angayaleliyo uThixo
Yintoni injongo yobomi ngokwebhayibhile: Ingcaciso ngeendinyana
Injongo yobomi ngokwebhayibhile
Ibhayibhile ithi eyona njongo yobomi bethu isekwe ekusondeleni kuThixo. Usidalele ukuba simdumise kwaye sibe nobudlelwane kunye naye ngoYesu sifumana injongo ebomini.
Esithanda, wasimisela ngenxa engaphambili ukuba síthande abantwana bakhe ngoYesu Kristu, ngokuthanda kukaThixo kwakhe,
ukuze kudunyiswe uzuko lobabalo lwakhe, awathi wasenza samkeleka ngalo kuye Osithandayo.
Efese 1: 5-6
UThixo nguMdali wobomiKungenxa yoko le nto enguYe onika injongo ebomini. UThixo wasidala ukuba simdumise. Usibumbe ngendlela ekhethekileyo, ukubonisa ubuqaqawuli bakhe nothando lwaKhe ngathi. Le yeyona ntsingiselo ibalulekileyo yobomi.
Amarhamncwa asendle aya kundizukisa, oodyakalashe neenciniba; ngokuba ndiya kugalela amanzi entlango, nditsho imilambo enkqantosini, ukuze basele abantu bam, abanyulwa bam.
Le dolophu ndizenzele yona; indumiso yam iya kupapasha.
UIsaya 43: 20-21
Ekuphela kwento enokugcwalisa ukungabikho komntu ebomini kukuba nobuhlobo noThixo »... ngo kuba bonile bonke, basilelela eluzukweni lukaThixo; begwetyelwe ngesisa lubabalo lwakhe ngako ukukhululwa ngentlawulelo ekuYesu Kristu.»KwabaseRoma 3: 23-24. KuThixo sifumana uxolo, ulwaneliseko nolonwabo. Ayikho enye into enokunika injongo yokwenene ebomini. Uthando lukaThixo lusinika injongo ebomini.
Ngenxa yesono, uluntu lwamshiya uThixo. Isono sishiya ubuze obuninzi ezintliziyweni zethu, kuba siyasusa kwabo basinika injongo kubomi bethu. Sizama ukugcwalisa isikhewu ngezinye izinto, njengemali, usapho kunye nempumelelo, kodwa ezo zinto azisonelisi ngokupheleleyo. NguThixo kuphela onika injongo ebomini.
Emva koko ndakhangela kuyo yonke imisebenzi eyenziwe zizandla zam, nomsebenzi ozenzileyo; Yabona, konke oko kungamampunge, nokuxhwaleka komoya, kungekho nzuzo phantsi kwelanga.
INtshumayeli 2: 11
U-Yesu weza ukuze sikwazi ukuba nobuhlobo noThixo kwakhona. Emnqamlezweni wathatha isohlwayo sezono. Ngoku, abo baguqukayo ezonweni zabo kwaye bamkele uYesu njengoMsindisi wabo baphinde bamanyana noThixo. Ubomi buvakala!
Ungayizalisekisa njani injongo angayaleliyo uThixo
UThixo nguye onika intsingiselo kuyo yonke into esiyenzayo ebomini. Xa sibeka uYesu 'njengasentla' kwekhampasi, asiphazanyiswa kwaye Ngobunkokeli bakho sinokufezekisa izinto ezintle. Abo bathanda uYesu baneenjongo ezininzi ezintle, ezongeza ixabiso kunye nentsingiselo kubomi basemhlabeni, ke ngoko kufuneka:
Thobela uThixo: Imiyalelo kaThixo ilungile kwaye Basinceda ukuba siphile ngenjongo.
Isiphelo sentetho yonke esiyivileyo yile, Yoyika uThixo, ugcine imithetho yakhe; kuba le ngumntu wonke.
INtshumayeli 12: 13
Bhengeza iindaba ezilungileyo zakhe. Ngale ndlela nayo uya kunceda abanye abantu ukufumana intsingiselo yobomi.
Weza uYesu wathetha kubo, esithi, Linikwe mna lonke igunya emazulwini nasehlabathini. Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptizela egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele; nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. kwaye qaphela, ndinawe yonke imihla, kude kube sisiphelo sehlabathi. Amen. UMateyu 28: 18-20
Yonwabela ubomi: ngaphandle koThixo, iziyolo zobomi azisigqibi; kodwa, noThixo, sinokufumana ulwaneliseko lokwenene Kuzo zonke izinto ezilungileyo asinika zona uThixo, nkqu nezona zilula.
Nantsi ke into elungileyo, endiyibonileyo mna, ilungile, into yokuba udle, usele, wenze okulungileyo emigudwini yakho yonke, othe wazidinisa ngayo phantsi kwelanga, yonke imihla yobomi bakho akunikileyo uThixo; kuba le yinxalenye yakho.Ngokunjalo ke kuye wonke umntu, athe uThixo wamnika ubutyebi nempahla, wamnika negunya lokuzidla, athathe inxaxheba, awonwabele umsebenzi wakhe, sisipho sikaThixo eso. INtshumayeli 5: 18-19
Ukuthanda abanye: Ukuthanda abanye abantu kunika ubomi ngakumbi, xa sithanda abamelwane bethu esiphilayo Injongo kaThixo.
Uze uyithande ke iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela, na ngomphefumlo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela, nangamandla akho ephela. Lo ngowona myalelo uphambili. Owesibini ke ufana nawo: Uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako. Awukho omnye umthetho inkulu kune ezi. UMarko 12: 30-31
Yandani nilawule umhlaba: ukuba yinxalenye yosapho, ukusebenza kunye nokukhathalela umhlaba zizinto ezintle kakhulu ezo bafumana intsingiselo yokwenene kuYesu.
Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe; wamdala ngokomfanekiselo kaThixo; wadala indoda nenkazana. Wabasikelela uThixo, wathi kubo, Qhamani, nande; niwuzalise umhlaba niweyise, nilawule phezu kweentlanzi zolwandle, nakwiintaka zezulu, naphezu kwazo zonke izinto eziphilileyo ezinambuzelayo emhlabeni. IGenesis 1: 27-28
Ukuqala kwethu ukufuna uBukumkani bukaThixo, usinika yonke enye into. Xa siluqonda uthando lukaThixo, ubomi bunentsingiselo ecacileyo. Enkosi kubo siphulukana noloyiko kwaye sonyusa ukuthembela kwethu kuye.
Njengamaxesha okuvuya kunye nobunzima, nathi siya kuba namaxesha anzima. Umahluko ukwinto esiyikholelwayo. Xa sikholelwa kuYesu siqala ukujamelana neengxaki ngendlela eyahlukileyo. UYesu wathi siza kuba neembandezelo kunye nobunzima, kodwa woyisile el mundo kwaye ungakwicala lethu, ke ngoko, akukho nto simele siyoyike.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku likuncedile ukuba uqonde yintoni injongo yobomi ngokwebhayibhile. Ukuba uyazibuza ungazi njani ukuba uThixo unawe, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.